Muuri News Network » LA OGAADAY: Sababta ay isku Casileen Taliyasha Ciidamada Xoogga Dalka (Warbixin)
LA OGAADAY: Sababta ay isku Casileen Taliyasha Ciidamada Xoogga Dalka (Warbixin)
Oct 13, 2017 - Comments off
Gelinkii dambe ee shalay Golaha Wasiirada xukuumadda Soomaaliya waxa ay magacaabeen Taliye Cusub oo loo magacaabay Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, magacaabistaas ayaa sida la sheegay ku timid ka dib markii uu is casilay taliyihii hore ee Ciidamada Genaraal Cirfiid.
Waxa macna badan yeelaneysa iscasilaadda Genaraal Cirfiid oo noqonaya Taliyihii ugu waqtiga yaraa inta la ogyahay taariikhda ee qabta xilka Taliyaha Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya, waxaana taliyaha la magacaaya Bishii Abriil ee sanadkan.
Sida aan ku heleyno xogo kala duwan Taliye Maxamed Jimcaale Geedi (Cirfiid) ayaa iscasilaadiisa loo sababeeyey dhowr siyaabood oo kala duwan, waxaana ugu weyn weerarkii ka dhici jirey deegaanka Bariire oo lagu laayey Maleeshiyaad Alshabaab ah oo ku sugnaa Beer halkaasi ku taalla.
Xog markaas la helay ayaa sheegeysey in Beertaas ay ku sugnaayeen Maleeshiyaad Alshabaab ah oo macluumaad badan ay ka aruuriyeen Sirdoon cadaan ah oo Bariire ku sugnaa, waxaana laga haayey Muuqaalo iyo cadeymo aan la dafiri Karin oo markaas lasoo bandhigey.
Generaal Cirfiid oo ay qabyaaladi madax martey ayaa si barer ah u garab istaagey maleeslhiyada duqeynta lagu dilay, iyadoo Beesha uu kasoo jeedo oo fursad gaad aheyd ay ku baroorteen in wiilal beeshooda ah la waxyeeleeyey.
Taliska Ciidamada Mareekanka ee Bariga Afrika ayaa cadeymaha uu soo bandhigey ku sheegay in ay wada shaqeyn Karin shaqsi aan qarsan Karin madax marka qabyaaladda, waxaana loogu baaqey in uu iska casilo xilka inta aan xilka laga qaadin.
In Muddo ah ayaa la sheegey in uu ka meermeerey iscasilaadda hase ahaatee marki dambe ayaa waxa uu ka wer heley in aanu baaqi kusii ahaan doonin xilka, si uu u ilaashado wax u eg sumcadiisa ayuu ku dhawaaqey in uu ka iscasilay.
Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Soomaaliya C.rashiid C/llaahi Maxamed ayaa dhankiisa sheegay in uu iscasilay, waxaana istaqaaladiisa uu usoo gudbiyey Wasiirada xukuumadda Soomaaliya, waxaana la sheegay in iscasilaadiisa ay ku timid arimo shaqsi ah oo isaga la xiriira.
Hase ahaatee Wasiirka oo dhaliilo qabey ayaa xilka in uu ka dego waxa soo dedejisey sida warbixinta aan ku helnay isagoo aan laga tala gelin magacaabidda Taliyaha cusub ee Golaha Wasiirada magacaabeen.
Magacaabidda iyo soo gudbinta Taliyaha Cusub Genaraal C/weli Jaamac Xuseen (Gorod) ayaa ah shaqsi ay si aad ah isugu dhowyihiin Wasiiru dowlaha Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Soomaaliy, ayaa soo gudbiyey, waxaana taasi ay keentey in Wasiirka uu xilka ka dego.
Milateriga Soomaaliya ayaa xilligan waxa ka taagan jahawareer iyadoo dhaliilo fara badan loosoo jeedinayo Wasaaradda Gaashaandhigga oo ka gaabisey in ay wax ka qabato howlo badan oo loo baahnaa.